Mihena 3 kilao mialohan’ny Krismasy…azo atao tsara!
20 andro sisa dia higadona ny fetin’ny Krismasy. Mbola azo atao ny mampihena tena mialohan’ny fety, raha manomboka dieny izao. Tsy maintsy mahay mifehy tena kosa anefa. Mila miezaka be ihany koa, manaraka ireto torohevitra manaraka ireto. Mety ho very hatramin’ny 3 kilao ianao, raha tena maharitra.
Tsy mitsakotsako mihitsy
Atsaharo hatreo ny mihinan-kinana sy mitsakotsako eny analenalenan’ny sakafo. Anisan’ny fady voalohany ny chocolat. Andraso any amin’ny fety indray vao mihinana e ! Torak’izany koa ny sakafo mitondra kalôria betsaka.
Tena tokony hampihetsi-batana, mihoatra ny taloha mihitsy, raha efa mba manao fanatanjahantena ihany. Mihazakazaka 20 minitra isa-maraina, ohatra. Mety ihany koa ny maka namana mba miaraka manao fampihetseham-batana. Mety misy namanao hafa any mba te hampihena tena alohan’ny fety ihany koa. Mazoto kokoa mantsy, rehefa mba miaraka manatratra tanjona. Na dia mandeha an-tongotra, miaraka manao « shopping » ihany koa aza, dia efa azo raisina ho fampihetseham-batana. Mihodinkodina ao an-tsena adin’ny 2 monja, dia efa handaniana kalôria betsaka. Tandremo anefa ny miraparapa misakafo be, rehefa avy vizana iny. Amin’ny antonony foana ihany ny fatrana sakafo. Aza adinoina kosa ny misotro rano betsaka.
Tsy mahazo manao maty noana
· Hevitra diso ny tsy misakafo amin’ny ora tokony hisakafoana. Tsy mifady sakafo akory, fa mihinana amin’ny antonony amin’ny karazan-tsakafo rehetra. Tokony ho efa fantam-patantrao kosa ireo sakafo tsy tsara hanina, toy ny sakafo be menaka be, ny zava-mamy loatra, ny sakafo vita indostrialy …
· Tsy tokony hifady menaka tanteraka ihany koa, fa tena ilaina izany, indrindra raha mampihetsi-batana. Mila 2 sotro isan’andro ny vatana.
· Torak’izany koa ny vary sy ny paty ary ny mofo (karazana « féculents »), izay tena ilaina be, satria siramamy ela vao levona ireo, ka manome hery. Mahavoky rahateo izy ireny, ka manakana ilay fitia te hitsakotsako. Noho izany, tsara raha mihinana « féculents » 4 sotro isaky ny sakafo, na mofo didiny 2, raha toa ka tsy misy vary na paty ny sakafo hanina.
· Tokony ampidirina ao anatin’ny sakafo hanina avokoa ny sokajin-tsakafo rehetra, mba tsy ho tojo tsy fahampiana otrikaina.